Sobstansa (teôlôjia): Fahasamihafan'ny versiona - Wikipedia
Sobstansa (teôlôjia): Fahasamihafan'ny versiona
Sobstansa (teôlôjia) (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 17 Desambra 2019 à 05:13
63 octets supprimés , il y a 2 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 17 Desambra 2019 à 04:54 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 17 Desambra 2019 à 05:13 (hanova) (esory)
== Ny "fampianaran-diso" momba ny sobstansa: ny arianisma ==
Ny [[Arianisma (teolojia)|arianisma]] dia nino fa ny Zanak'Andriamanitra dia nisy talohan'izao tontolo izao nefa noforonin'Andriamanitra mivantana sady eo ambany fahefan'Andriamanitra Ray. Ny fomba fijerin'i Ariosy dia izao: nateraka ny Zanaka ka toy ny noforonin'Andriamanitra voalohany indrindra ary avy eo namorona ny zava-drehetra tamin'ny alalan'ny Zanaka ny Ray. Ny [[fanekem-pinoana]] ariana fahafito (fanekem-pinoana faharoan'i Sirmioma) dia manambara fa ny ''homoousios'' (mitovy ''ousia'' na ''sobstantia'') sy ny ''homoiousios'' (''sobstantia'' na ''ousia'' mifanahaka) dia tsy araka ny [[Baiboly]], lehibe noho ny Zanaka ny Ray (izany fanekem-pinoana izany dia fantatra taty aoriana amin'ny anarana fanaratsiana hoe "Blasfeman'i Sirmioma"). Maro ny endrika nisehoan'ny arianisma ka isan'izany iretoireo horesahina ao manarakaaoriana ireto, raha momba ny sobstansa. Tsy dia inisahirananisahirana loatra tamin'ny fifandraisan'ny Ray amin'ny Fanahy Masina ny Ariana raha momba ny sobstansa. Ireo izay tsy manao ny Zanaka sy ny Fanahy Masina ho Andriamanitra dia isan'ireo lazaina fa manao fampianaran-diso manohitra ny [[hômôosisma]].
=== Ny arianisma ===
Ny antoko voalohany tamin'ny arianisma dia ireo avy any Atsinanana izay manaraka ny [[Fanekem-pinoana nikeana|Faneke-mpinoana nikeana]] nefa misalasala ny amin'ny fampiasana ny [[Fiteny grika|teny grika]] hoe ''ὁμοούσιος'' / ''homoousios'' (latina: ''consubstatialitaconsubstantialita'' "fitoviana sobstansa", "fitoviam-pomba") ao amin'ilay fanekem-pinoana nefa tsy hita ao amin'ny [[Soratra Masina]]. Ny antoko faharoa amin'ny arianisma dia ireo izay nilaza fa tsy mitovy sobstansa amin'ny Ray ny Zanaka, na tena tsy mitovy aminy mihitsy.
===== Ny hômôiosisma =====
Ao ireo Ariana manaraka ihany ny [[Fanekem-pinoana nikeana|Faneke-mpinoana nikeana]] nefa nandanjalanja ny amin'nyka fampianarananampianatra momba ny [[hômôiosisma]] ka nilaza fa manana sobstansa hafa sahalahala fa tsy mitovy (grika: ''ὁμοιούσιος'' / ''homoiousios'') amin'ny an'ny Ray ny Zanaka. Tsy ampifangaroina amin'ny ''hômôosisma'' ny ''hômôiôsismahômôiosisma''.
==== Ny hômeisma ====
Ao ireo Ariana manaraka ny [[Fanekem-pinoana nikeana|Faneke-mpinoana nikeana]] nefa nandanjalanja ny amin'ny fampianarana momba ny [[Homoiosisma|hômôiosisma]] ka mampianatra fa sahalahala (grika: ''όμοιος'' / ''hómoios'') amin'ny Ray ny Zanaka.
==== Ny heterôosiana ====
==== Ny anômosiana ====
Misy koa ireo izay nilaza fa tena tsy mitovy (grika: ''ἀνὅμοιος'' / ''anomoios''). amin'ny Ray ny Zanaka.
=== Ny monarkianisma ===
Ny [[monarkianisma]] dia vondrom-pampianaram-pinoana kristiana niseho tamin'ny taonjato faha-2 sy faha-3 izay mifanohitra amin'ny fampianarana ny amin'ny [[Trinite]]. Ireo fampianarana ireo dia manantitra ny maha tokana an'Andriamanitra ([[monoteisma]]) ao amin'ny fivavahana kristiana. Amin'ireo mpanaraka ireo fampianarana ireo dia tsy [[Zanak'Andriamanitra (kristianisma)|zanak'Andriamanitra]] sady samy hafa amin'ny [[Andriamanitra Ray|Ray]] i [[Kristy]]. Nizara roa ny Monarkiana, dia ny [[Adoptianisma|Adoptianista]] sy ny [[Modalisma|Modalista]]: ny Adoptianista dia mihevitra fa tsy manam-piaviana araka an'Andriamanitra i Jesosy fa olona ihany nefa natsangan'Andriamanitra ho zanany tamin'ny nanaovana [[batisa]] azy.
Ireto koa ny fampianarana hafa isan'ireo mitsipaka ny firaisam-pomban'nyRay sy ny Zanaka: ny [[psilantropisma]], ny [[sotsinianisma]], ny [[sobôrdinatianisma]] ary ny [[Onitarisma (teolojia)|onitarisma]].
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/978519"